I-Pixelz: Isevisi Yokuthwebula kabusha Ifoni Yesidingo se-E-Commerce | Martech Zone
Uma wake wakha noma waphatha isiza se-ecommerce, into eyodwa ebucayi kepha edla isikhathi yikhono lakho lokugcina usesikhathini izithombe zomkhiqizo ezincoma isayithi. Osomabhizinisi abathathu baseDenmark abakhathele ukungena enkingeni efanayo ekhungathekisayo ngokwakhiwa kwangemuva kokukhiqiza I-Pixelz, ipulatifomu yesevisi ezokwenza hlela, thinta kabusha, futhi ulungiselele izithombe zomkhiqizo wakho, ukhulule okwakhiwe kwakho ukuze kudaleke.
I-E-commerce yakhelwe ezithombeni — izigidigidi zemifanekiso yomkhiqizo ziyachofozwa, ziswayipishwe, futhi ziqhathaniswe namakhasimende nsuku zonke. Ukunqoba lawo makhasimende, ama-brand kanye nabathengisi kufanele bakhiqize izithombe ezisezingeni eliphakeme, ngokushesha, nangevolumu enkulu kakhulu kunakuqala. Yilapho insizakalo yokuphinda uthinte khona iPixelz edingeka kakhulu ingena khona: umugqa wethu wokuhlangana we-Specialist Assisted Workflows (SAW ™) uguqula ukuhlelwa kwesithombe kube yi-Software-as-a-Service.
Unekhono lokwenza ngezifiso ngokugcwele ukukhishwa okulindelwe kwezithombe zakho ukuqinisekisa ukuthi zakhelwe izidingo zakho ze-e-commerce.
IPixelz ibuye yathuthukisa ezinye Amaphepha amhlophe afundisayo ngemikhuba emihle yokwethulwa komkhiqizo we-ecommerce. Ipulatifomu yabo inikeza amaphakheji amane entengo ahlukene:
Solo - inikeza abathwebuli bezithombe abanekhono lokususa izizinda, isitshalo, ukuqondanisa, ukwengeza izithunzi, nokulungisa izithombe zomkhiqizo. Iphakethe liza nemifanekiso engu-3 yesivivinyo samahhala nokuguqulwa kwamahora angama-24 (Mon-Sat).
Umthengisi we-Pro - inikezela ngochwepheshe be-e-commerce ngayo yonke into eseSolo ngentengo ephansi yesithombe ngasinye, ukufaniswa kombala kanye noshintsho olulandelayo ekuseni (Mon-Sat), enenketho yokusheshisa yamahora ama-3.
I-Pro Studio - inikeza konke oku-Solo ngaphezu kokuphinda kwenziwe kabusha ngokwezifiso, ukufaniswa kombala, ukubuyisela umbala kabusha, ukuhamba komsebenzi nokungena ebhodini lezitudiyo zezithombe zobuchwepheshe. Kufaka phakathi isivumelwano sezinga lesevisi, ukugibela ngobuchwepheshe, ukuphathwa kwe-akhawunti okuzinikele nabasebenzisi abaningi.
API - Hlanganisa ukuzenzakalelayo kokuhamba komsebenzi kusicelo sakho senkampani yangaphandle sabathengisi, izimakethe, nezinhlelo zokusebenza zeselula nge-RESTful noma i-SOAP API.
Tags: ukuthinta isithombeizithombeukuthinta isithombeI-pixelzukukhiqizwa kokuthunyelweizithombe zomkhiqizoizithombe zomkhiqizo